tombony - Sichuan Zhengcheng Starlight Energy Saving Technology Co., Ltd.
1. Izahay dia mpanamboatra manokana amin'ny famokarana boaty jiro mitsitsy angovo ho an'ny fivarotana mora.Tsy misy komisiona mpanelanelana hiara-miasa aminay.
2. Hatramin'ny niorenany 7 taona lasa izay, ny orinasa dia nahazo patanty nasionaly efatra tao amin'ny indostrian'ny famokarana boaty hazavana fivarotana.
3. Ny orinasanay dia manana orinasa matihanina manana velaran-tany 4,200 metatra toradroa ary boaty maivana efatra mamorona tsipika famokarana.
4. Zhengcheng izao dia nanompo marika maherin'ny 100 any Shina ary mamokatra boaty jiro mitsitsy 30.000 metatra eo ho eo isan-taona.
5. Ny orinasanay dia nanakarama mpamorona matihanina hanome sary ho an'ny famantarana ny fivarotanao.Maimaim-poana ny drafi-drafitra ataonay.
1. Ny boaty jiro feno dia mandany angovo, ary ny fitaovana fandrefesana ao anatiny dia mora simba.Tsy mibaribary amin'ny alina ny tarehin-tsoratra manjelanjelatra, ary mirona amin'ny taratra mazava ny tarehin-tsoratra mamirapiratra.
2. Ny takelaka famantarana nentim-paharazana dia natao amin'ny ankapobeny, ary ny fikojakojana dia mitaky matihanina matanjaka, ary ny vidin'ny fikojakojana dia avo, na tsy azo amboarina mihitsy aza, ka miteraka fandaniana avo lenta.
3. Ny asa fanamboarana dia tena sarotra, ka aorian'ny fe-potoana fiantohana, ny mpanamboatra dia tsy vonona ny hanamboatra ny famantarana.
4. Ny vidin'ny fampiasam-bola voalohany amin'ny famokarana signboards tsotra dia somary ambany, satria ireo takela-by ireo dia vita amin'ny takelaka acrylic recycled.Na izany aza, ny tontonana dia hanjavona, deform, dent sy ny olana hafa ao anatin'ny 3 ka hatramin'ny 5 volana, izay mampihena be ny fiainana fanompoana ny famantarana.
5. Amin'ny famokarana boaty maivana nentim-paharazana, ny lakaoly chloroform dilute dia matetika ampiasaina hamatotra ny swatch sy ny tontonana.Malemy ny famehezana famehezana, ary mora azon'ny fitaoman'ny mari-pana sy ny anton-javatra mampihetsi-po ka miteraka triatra.Ny vovoka sy ny loto dia mora miangona eo amin'ny swatch sy ny takelaka rehefa avy nosasana tamin'ny orana.Noho izany, ny vovoka sy ny loto dia tsy azo diovina, ary hisy fiantraikany amin'ny famirapiratan'ny takelaka famantarana ary hanimba ny endriky ny takelaka.
6. Ny boaty jiro nentim-paharazana dia namboarina araka ny haben'ny toerana.Raha mihetsika ny fivarotana dia latsaky ny 5% ny tahan'ny fampiasana takelaka famantarana tany am-boalohany.
1. Mampihena ny vidin'ny fampiasana famantarana (firafitry ny patanty mitsitsy angovo / fampihenana ny vidin'ny fikojakojana / fiainana serivisy maharitra).
2. Ny vokatray dia mora apetraka ary manangana rafitra fikojakojana tsy misy fanahiana, tsy misy disassembly, manamora ny fikojakojana.
3. Ny famolavolana tontonana miolikolika dia manamafy tanteraka ny fahamarinan-toerana ara-drafitra sy ny fanoherana ny deformation ny boaty maivana.
4.V-miendrika 45-degree light emitting nitarika jiro vokatra patanty, mba hampiasana angovo maivana kokoa.
5. Ny famokarana modular sy ny stocking dia mahatonga azy io haingana hananganana fivarotana.
6. Misongadina kokoa ny loko sy ny haingon-trano, ny traikefa hita maso telo-dimensional.
7. Ny lakandrano manokana mifanandrify dia stylish sy tsara tarehy, sady miaro ny signboard amin'ny stains.
Superiorities ny vokatra
1. Manara-penitra kokoa, manara-penitra kokoa, miray hina kokoa, mety kokoa
Kisary fandravana ny rafitry ny boaty maivana
2. Tsy tantera-drano sy vovoka
Zhengcheng boaty jiro mitsitsy angovo dia mampiasa endrika fatorana vata feno voaisy tombo-kase tanteraka mba hahazoana antoka fa ny habaka anatiny ao amin'ny boaty maivana dia tsy misy rivotra ary mitoka-monina tanteraka ny etona, vovoka ary moka.
3. Famolavolana rafitra fikojakojana tsara
4. Fanjifana angovo faran'izay ambany
Ny famolavolan'ny habaka jiro mandroso dia mahatsapa ny taratry ny angovo maivana faharoa ary mampitombo ny fampiasana loharanom-pahazavana.Raha ampitahaina amin'ny boaty jiro nentim-paharazana, ny boaty jiro mitsitsy angovo Zhengcheng dia afaka mitahiry 65% ​​amin'ny herinaratra.
5. Zhengcheng Patented Light Tube
Zhengcheng angovo-mitsitsy jiro boaty fomba jiro
Fomba jiro nentim-paharazana boaty jiro
Maka magazay 100 amin'ny fivarotana marika iray, ny takelaka famantarana dia 1m * 10m (24 ora), ary ny jiro dia mirehitra mandritra ny 12 ora isan'andro ho ohatra, ny fampitahana ny fanjifana angovo eo amin'ny boaty jiro mitsitsy angovo Zhengcheng sy ny hazavana mahazatra. boaty.
Boaty jiro nentim-paharazana Zhengcheng Energy-saving Light Box
fantsona maivana Fantsona jiro LED (16w) Patented V-miendrika 45 degre nitarika hazavana loharano (28w)
fomba jiro 4 andalana isaky ny metatra, 1,1 metatra ny jiro isaky ny andalana, vondrona 9 amin'ny fitambarany 7 Modules (Tube iray / Module iray) + 2 zoro (antsasaky fantsona / zoro iray), Modules 8 amin'ny fitambarany
fanjifana herinaratra 0.016kwh*4andalana*9vondrona*12h/d*365d=2522kwh 0,028kwh*8groups*12h/d*365d=981kwh
faktiora herinaratra (1.2 CNY / KWH) 2522*1.2*100=302600CNY 981*1.2*100=117700CNY
Mampiasà boaty jiro mitsitsy Zhengcheng mba hitsitsiana faktioran-jiro ao anatin'ny herintaona:
5 taona: 184900CNY/y*5=924500CNY≈138274.04USD
Famantarana mirehitra, Pharmacy Signboard, Vacuum Forming Light Box Signboard, Blister Light Box Signboard, Fanondroana Boaty Jiro ivelany, Supermarket Signboard,